Miatrika Ny Fandriky Ny Trosa Anaty Tranonkalam-pifandraisana ireo Shinoa Mpianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2016 15:48 GMT
Mandrisika ny mpianatry ny oniversite amin'ny fandoavana tsikelikely ny toeram-pivarotana lehibe Shinoa anaty tranonkalam-pifandraisana. Saingy miafina ao ny loza. (Sary: Patrick Wong)
“Ho an'ny Shinoa mpianatry ny oniversite, ny olana manahirana taorian'ny nahazoana diplaoma dia ny hamerina ny findramam-bola, fa tsy ny fisarahana amin'ny sipa, na ny hiatrika ny tsy fisian'asa,” naneho hevitra vao haingana tao amin'ny Weibo, ilay tambajotra Shinoa mitovy amin'ny Twitter, ny mpampiasa aterineto iray.
Niroborobo ny tolotra ara-bola Shinoa anaty tranonkalam-pifandraisana tao anatin'ny taona vitsivitsy, ary maro ny vovonana manao fampindramam-bola madinika ho an'ny mpanjifany amin'ny fiantsenana anaty tranonkalam-pifandraisana.
Tena mahazo vahana eo amin'ny mpianatry ny oniversite ny tolotra fampindramam-bola madinika toy izany. Kanefa maro amin'izy ireo no latsaka ao anaty fandriky ny mpampanjana-bola amin'ny farany.
Du, mpianatry ny oniversiten'i Huai'an, faritanin'i Jiangsu, faritra iray any atsinanan'i Shina, dia nividy iPhone iray azo aloa tsikelikely tamin'ny orinasa mpampindram-bola anaty tranonkalam-pifandraisana, nefa nahatsapa izy fa tsy afaka nandoa ny trosany ara-potoana.
Mba hialàna amin'ny fahataràn'ny fandoavam-bola, nanao findramam-bola izy taorian'ny iray hafa ary tamin'ny farany nivangongo ny trosany ka efa ho 80.000 yuan (eo amin'ny 12.380 $) ny fitambarany.
Iray amin'ireo maro izy.
Tsy misy fitsipika sy feno fandrika ho an'ny mpampiasa vola sy ny mpanjifa ny fitomboan'ny tsenan'ny tolotra ara-bola amin'ny aterineto izay miainga amin'ny fampindramam-bola ka hatramin'ny fampiasam-bola.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nampangain'ny manampahefana ny Ezubao , orinasa ara-bola anaty tranonkalam-pifandraisana, ho nisintona vola tsy ara-dalàna mahatratra 50 lavitrisa yuan (7,8 arivo lavitrisa $) avy amin'ny olona 9 hetsy manerana ny firenena, araka ny masoivohom-baovao Xinhua an'ny fanjakana.
Saran'ny tolotra miafina
Mahatsapa matetika ny tsindry ara-tsosialy goavana mba anarahana ny fihazakazaky ny fivoaran'ny lamaody ao amin'ny firenena ireo mpianatra tsy manam-bola ao amin'ny oniversite. Ninia nikendry io vondrona minomino foana io ireo orinasa mpampindram-bola mpiremby.
Maro ny orinasa miara-miasa amin'ny vovonana fiantsenana anaty tranonkalam-pifandraisana, amin'ny alalan'ny fanomezana fandrisihana ho an'ny mpianatra mba hividy ny vokatr'izy ireo amin'ny fandoavana izany tsikelikely.
Mila mampiseho ny karapanondrony fotsiny ny mpianatra, ary mameno vondrom-panontaniana fohy ao anatin'ny dingana fampiharana findramambola, ka ny fankatoavana dia latsaky ny 24 ora amin'ny ankapobeny.
Matetika ireo mpianatry ny oniversite no manao tsirambina ny fangatahan'ny orinasa mpampindram-bola mikasika ny sarany fanampiny amin'ny tolotra mba handaminana ny fifanarahana. Rehefa tsy afaka ny handoa ny trosany ireo mpianatra, ny ray aman-dreniny no tsy maintsy miandraikitra izany — raha afaka manao izany izy ireo.
Toy ny tatitra nataon'ny Southern Weekend tamin'ny volana lasa, nisy mpianatry ny oniversite iray nividy iPhone tamin'ny alalan'ny fanaovana sonia fifanarahana tamin'ny Hi Cash, orinasa mpampindram-bola malaza ao amin'ny Aterineto.
Ka niafara tamin'ny fandoavany 50 isan-jato ambonin'ny vidy voalaza noho ny sarany miafina tamin'ny tolotra, fa mbola ho avy ny ratsy indrindra.
Nampihorohoro ilay mpianatra ny nahitany tatỳ aoriana fa ny fifanarahana nataony sonia dia fifanarahana fahefatra izay nankatoa ny Hi Cash hampiasa ny torohainy mba hangataka findramam-bola amin'ny anarany amin'ny orinasa iray hafa, fifanakalozana izay lazainy fa tsy fantany.
Araka ny fomba fanao amin'izao fotoana izao, takiana fotsiny mba hisoratra anarana ao amin'ny Biraom-panjakana misahana ny Indostria sy ny Varotra ny orinasa mpampindram-bola amin'ny Aterineto, fa tsy misy fanaraha-maso avy amin'ny manampahefana ara-bola.
Ankoatra izany, manome toerana malalaka ho an'ny fialàna andraikitra ny fangatahana findramam-bola anaty tranonkalam-pifandraisana, izay tsy mila afa-tsy torohay fototra momba ny maha-izy.
Zheng, mpianatry ny oniversite iray ao faritanin'i Henan ao Shina, dia namono tena taorian'ny nananany trosa hatramin'ny iray tapitrisa yuan (mihoatra ny 150.000 $) tamin'ny volana lasa, araka ny China Times.
Nilaza ny tatitra fa nampiasa karapanondro 28 an'ny mpiara-mianatra aminy i Zheng hahafahany mangataka fampindramam-bola mba hilokàny tamin'ny lalao baolina kitra anaty tranonkalam-pifandraisana.
Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny orinasam-panjakana Central Television, nilaza ny rain'i Zheng fa tokony hanaiky ny anjara andraikiny tamin'ny fahafatesan'ny zanany ilay orinasa mpampidram-bola.
Ankoatra ny teknika mahazatra mba hampijaliana ny manan-trosa (antso an-telefaonina maharitra, taratasin'ny mpisolovava, sns) toa mampiasa ny fampijaliana ny fianakaviana ireo orinasa mpampidram-bola ary mampiharihary amin'ny daholobe ny anaran'ny mpianatra manan-trosa amin'ny alalan'ny vovonana anaty tranonkalam-pifandraisana.
Mandritra izany fotoana izany, niantso ho amin'ny fandraisana andraikitra manomboka ao an-trano ny People’s Daily, mpitondra tenin'ny Governemanta , nilaza tamin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra mba “hitarika ny fisainany, hikolokolo ny fahalalàny ara-bola ary hampitombo ny fahatsapàny ny loza mety hitranga.”
Mba hisorohana ny fampiasana miompampana ny torohay manokan'ny mpianatra, nanoratra lahatsoratra iray tao amin'ny Financial Times ry Wang sy Guo Xinrui Junlei, mpisolovava ao amin'ny Anli Partners ao Beijing, mamporisika ny governemanta mba hiantoka ny fiarovana ny angon-drakitra manokana ary hanitatra ny fanaraha-maso ny fitsipika momba ny vola anaty tranonkalam-pifandraisana.
Misy torohay saropady mikasika ny maha-izy sy ny fifanakalozana ny sehatra ara-bola anaty tranonkalam-pifandraisana. Hanimba ny tombontsoam-bahoaka ny fiporitsahan'ny torohay. Tokony hametraka famerana bebe kokoa ny manampahefana mba hisorohana ny fiporitsahan'ny torohay ary hanasazy mafy ireo tompon'andraikitra.
Sheng Songcheng, Tale Jeneralin'ny Sampan-draharahan'ny Antontanisa sy Famakafakàna ao amin'ny Bankim-Bahoaka ao Shina, dia nilaza tamin'ny Janoary fa hifantoka amin'ny fanaraha-maso ny fampindramam-bola anaty Aterineto ny banky, izay tafiditra amin'ny rafitra fanaraha-maso namafisina, raha tamin'ny faran'ny taona lasa namoaka toromarika feno ho an'ny fampiroboroboana ny fampandrosoana madio momba ny ara-bola anaty Aterineto ny banky sy ireo departemanta ara-bola hafa ao amin'ny governemanta.
Faritan'ilay taridàlana fa tokony hifanaraka amin'ny rafitra ara-dalàna amin'izao fotoana izao ireo tolotra ara-bola anaty tranonkalam-pifandraisana ireo, toy ny Fepetra momba ny Fampindramam-bola Manokana, izay mamaritra ny zanabola isan-taona tsy mihoatra ny 24% ho tsy azo hiadian-kevitra eo amin'ny lafin'ny lalàna.
Na izany aza, mbola ho hita eo ny fomba hampiharana ilay taridàlana.